Taunggyi Time (တောင်ကြီးတိုင်းမ်): May 2010
မိုးမရွာသောကြောင့် တောင်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းရှိ တောင်သူလယ်သမားများ ဒုက္ခရောက်
ဇွန်လ ၁ ရက်၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်။ အင်္ဂါနေ့
ယခုနှစ်တွင် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်သည့်ရာသီ ရောက်လာသော်လည်း မိုးရွာသွန်းမှုအလွန်နည်းပါးသောကြောင့် တောင်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းရှိ တောင်သူ လယ်သမားများ တောင်ယာ ခြံ လယ်လုပ်ငန်းများ မလုပ်ကိုင်နိုင်သောကြောင့် လာမည့်နှစ်များအတွက် စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲဖြစ်မည်ကို ပူပန်နေကြကြောင်း သိရသည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနှင့် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတဒေါက်တာ အေပီဂျေ အဗ်ဗဒူလ်ကလမ်တို့၏ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးချက် မှတ်တမ်း
ပအိုဝ်းခေါင်းဆောင် ဦးအောင်ခမ်းထီ ရွေးကောက်ပွဲမ၀င်ဟုဆို
The Voice Weekly (Monday, May 24-30, 2010)
ပအိုဝ်းအမျိုးသားခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ ဦးအောင်ခမ်းထီသည် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် အရွေးခံမည်မဟုတ်ကြောင်း ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ၏ နာယက (၃) ဖြစ်သူ ဦးခွန်မောင်တုတ်က ပြောကြားသည်။
မေလ (၂၄)၊ ၂၀၁၀
လွန်ခဲ့သည့် ၂၀၀၉ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင်တကြိမ်နှင့် ယခု ၂၀၁၀ ခုနှစ် နှစ်ဦးပိုင်းတွင် တကြိမ် ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ဆီဆိုင်မြို့နှင့် ဆီဆိုင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာအချို့တွင် အစိုးရမှ လိုင်းဖုန်းများ တွယ်တန်းတပ်ဆင်ပေးကြောင်း သိရသည်။
တောင်ကြီးမြို့တွင် မိုးသဲထန်ရွာ၊ ပြည်သူလူထုများ အမှိုက်ရှင်းရန် လုပ်အားပေးခိုင်းခံရ
မေလ (၂၀)၊ ၂၀၁၀။ နောင်ခမ်းခါ
တောင်ကြီးမြို့တွင် လွန်ခဲ့သည့် မေလ (၁၆) ရက်နေ့၌ မွန်းလွဲပိုင်း ၃ နာရီလောက်တွင် တကြိမ်နှင့် ညတန်းခေါင် ၁၂ ချိန်လောက်တွင် တစ်ကြီမ် မိုးသဲထန်စွာ ၂ ကြိမ် ရွာသွန်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဤဓာတ်ပုံများကို ဒိမိုဝေယံ ဆိုဒ်မှ ပြန်လည်ကူးယူ ဖေါ်ပြထားပါသည်။
About 300,000 people in Thailand have died from cancer annually since 2000, the Public Health Ministry reported.
"Cancer is the most common cause of death for the past decade," Public Health permanent secretary Paichit Sarachit said on Sunday.
Friday, May 7, 2010 (The Irrawaddy)
A former leader of the National League for Democracy (NLD) who plans to formanew political party to contest in the coming election said the party will ally with other pro-democracy and ethnic parties to shape the pro-democracy movement.
နရီလင်းလက် Wednesday, May 05, 2010
မီဒီယာများတွင် လက်ရှိ အစိုးရကို "တပ်မတော် အစိုးရ" ဟု ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲခြင်း မပြုကြရန် ကာကွယ်ရေးဦးချုပ် (ကြည်း) ၏ ညွှန်ကြားချက် မကြာသေးမီက ထွက်ပေါ်လာကြောင်း သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့်လ ၂၆ ရက်နေ့က ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာန၏ မီဒီယာများ၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သတင်းစာ၊ ရေဒီယို၊ ရုပ်မြင်သံကြား ဌာနများသို့ ညွှန်ကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု နေပြည်တော်မှ အဆင့်မြင့် အရာရှိ တဦးက ဆိုသည်။